Ifulethi elikhulu elibukekayo enkabeni yeTàrrega - I-Airbnb
Ifulethi elikhulu elibukekayo enkabeni yeTàrrega
Tàrrega, Catalunya, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-L’Antiga
Njengoba inemvelaphi ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye futhi yanwetshwa maphakathi nekhulu lamashumi amabili, i-L'Antiga yindlu esiyinikeza izivakashi zethu.
Ukugcina ukubaza, ukubeka phansi kanye nophahla, indlu isanda kulungiswa, igcina ingqikithi yendlu ngaphandle kokudela ukusebenza kwekhulu le-XXI.
Ifulethi litholakala esitezi sokuqala, kanye nethala elikhulu, futhi selilungele ukuhlalisa abantu abangu-7, phakathi kwamagumbi okulala amathathu nendawo yokuhlala exhunywe ekamelweni elikhulu.
Indawo yokuhlala itholakala esitezi sokuqala, kanye nethala elikhulu, futhi ifinyelelwa ngezitebhisi zamatshe zangempela.
Siqukethe: okuyinhloko lokulala embhedeni kabili futhi endaweni abaphila ne usofa embhedeni, lokulala imibhede ezimbili elilodwa, lokulala elilodwa, zokugeza ezimbili, elikhulu eziphilayo-udla Igumbi-ekhishini 50m2, okuyindawo kufinyelelwa ku ithala of 70m2 ngokusebenzisa igalari futhi ilungele ukwamukela abantu abangafika kwabangu-7/8. Sinombhede wokuvakasha ngokwesicelo.
I-air conditioning isanda kufakwa endaweni yokuhlala-ikhishi-indawo yokudlela kanye namafenisha ophahleni emakamelweni. I-Wi-Fi iyatholakala.
Indlu inomnyango omkhulu ongasetshenziselwa izivakashi ngokukhethekile futhi ilungele ukugcina amabhayisikili nama-pram.
Indawo yokupaka izimoto yamahhala kanye / noma ekhokhelwayo iyatholakala eduze.
Indlu itholakala emgaqweni omkhulu, enemigwaqo ebanzi nenqwaba yezinsizakalo nezitolo: izindawo zokudlela, amathilomu, amasinema, amabhikawozi, izitolo ezinkulu, indawo yezitolo kanye nenkundla yokudlala, kanye nokuhamba imizuzu emi-5 ukusuka eTown Hall Square.
Ngenxa yobukhulu bedolobha, kulula ukuhambahamba enkabeni yedolobha.
I-Tàrrega iyidolobha elincane kodwa elinokuningi okumelwe ukwenze nokuthola, okufana nalokhu:
- Hamba edolobheni elidala futhi uhlole imizila yabavakashi basemadolobheni eyahlukene edolobheni: owamanje, isonto, indawo yamaJuda, indawo yokushuka isikhumba endala, kanye nomzila wezimboni owelula umzila.
- Iba nesikhathi esimnandi sokuhamba emakhoneni e-Sant Eloi Park noma osebeni lomfula i-Ondara.
- Ukugibela izintaba noma ukuhamba ngebhayisikili emizileni eyahlukene yendawo neyesifunda.
- Zivumele umangaliswe ukudla okuhle kwezindawo zokudlela eziqashelwa kuzwelonke noma osazoqashelwa.
- Iba nekhofi elimnandi, hlala ethafeni eline-vermouth noma uphuze kahle kwenye yezindawo zokucima ukoma zedolobha.
- Jabulela imikhosi ehlukahlukene ubuciko Fairs ezifana: Lo Closcamoll (omculo wezingane), Paupaterres (umculo) futhi Paupakids (zezingane), Embarrat (ukudalwa wesimanje), Fira del teatre (yaseshashalazini), Fair Abaculi '(emakethe nemisebenzi) esivamile) , phakathi kwabanye.
Ngasikhathi sinye, i-Tàrrega iphinde ibe yisiqalo esihle kakhulu semisebenzi kanye nokwazi izindawo ezithokozisayo eziseduze ezitholakala nje kuyimizuzu engama-20 ngemoto, njenge:
- Jabulela ubuciko basezindongeni basePenelles, idolobhana lasemaphandleni elinemidwebo eminingi.
- Nambitha iwayini elimnandi endaweni eyaziwayo.
- Thatha uhambo noma ugibele ibhayisikili, ubuke izinyoni, ube nepikiniki noma ubambe iqhaza emisebenzini ehleliwe endaweni yemvelo ebuyisiwe yase-Estany d'Ivars naseVila-sana.
- Vakashela amagugu ezakhiwo anjengeSigodlo Sezindela saseVallbona de les Monges, okungesikaCistercian Route, kanye nesaSantes Creus nePoblet.
- Dlala ku-Corn Labyrinths yaseCastelserà.
- Thola inqaba yaseVerdú bese uhamba emigwaqweni ufuna indawo yokusebenzela yobumba.
Ngesikhathi sokuhlala, mina noma umuntu owethembekile sizotholakala ukuze sixazulule noma imiphi imibuzo noma izinkinga.
Inombolo yepholisi: HUTL-041932
Hlola ezinye izinketho ezise- Tàrrega namaphethelo